Dhimasho & Dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Dhimasho & Dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Dhimasho & Dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Dagaalka ayaa waxaa uu Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo Xubno kamid ah Al-Shabaab ku dhexmaray degaanka Sabiib ee duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen Salshigyada Ciidamada dowladda ee degaanka Sabiib, waxaana dadka degaanka ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka uu ku dhintay hal Askari oo katirsan Ciidanka dowladda halka laba kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ku sugnaa Saldhiga la weeraray sida ay sheegeen dadka degaanka.
Saraakiisha Ciidamada dowladda ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weli ka hadlin dagaalkaas, waxaana Saldhiga Ciidamada ee degaanka Sabiib dhowr jeer ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Previous articleCiidanka DANAB oo howlgallo ka fuliyay Shabeellaha Dhexe
Next articleCovid: Christmas travel will fuel spread of Omicron, US expert warns
DHAGEYSO: Barnaamijka Kaaha Cadaaladda Qeybta 8aad
Khasaaraha Hantiyadeed ee ka dhashay dabkii Suuqa Magalada Hargeysa oo la...